Imfihlo yeShishini leSoftware | Martech Zone
NgoLwesibini, Septemba 4, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Lixesha elinomdla lokuba kumzi-mveliso wesoftware. Ngokuchaphazeleka, kwaye ngoku "i-web 2.0" kunye nenethiwekhi yoluntu kwezona ziqhelekileyo, sisesebusaneni kodwa siyakhula.
Kwinqanaba lebanga, ndiza kuthi mhlawumbi sijikeleze ibanga le-9. Asikakhululekanga kulusu lwethu, siyavuya sisoftware ejongeka ngathi 'iphucukile kakhulu', kwaye siqala nje ukwakha ubuhlobo obunethemba lokuhlala ubomi bonke.
Abathengi ekugqibeleni baya besondela kwisoftware yethu. Abaphathi beemveliso ekugqibeleni bafumana incasa elungileyo-bayancoma imveliso enkulu enoyilo olulungileyo oluthengisa kunye nentengiso efanelekileyo.
Oko kwathiwa, ubuxoki bokuthengwa kwesoftware busekhona. Xa uthenga imoto entsha, uyazi ngokubanzi ukuba izakulunga, ikhwele kakuhle, indlela yayo kunye nendlela ekhawulezisa ngayo ukusuka kuvavanyo lokuqhuba. Ukuba ufunda ngayo kwimagazini ezenzekelayo yintatheli enkulu, ufumana imvakalelo yokwenene malunga nendlela imoto eza kuziva ngayo ngaphambi kokuba ungene kuyo.
Isoftware ineemvavanyo zokuqhuba kunye nokuphononongwa ngokunjalo, kodwa azange zifezekise ulindelo lwethu, andibi kunjalo? Inxalenye yengxaki kukuba, ngelixa iimoto zisiya phambili, zibuyela umva kwaye zineminyango kunye namavili, isoftware ayilandeli imigaqo efanayo… kwaye akukho bantu babini abayisebenzisa ngokufanayo. Kuze kube yilapho sixakeke kwimisebenzi yethu yemihla ngemihla apho sifumanisa ukuba yintoni 'engekhoyo' kunye nesicelo. Ilahlekile xa yayiyilwe. Ilahlekile xa yaphuhliswa. Kwaye okubi kakhulu, kuhlala kuphoswa kwintengiso.
Kungenxa yokuba mna nawe asithengi isoftware ngendlela esiza kuyisebenzisa ngayo. Amaxesha ngamaxesha, asiyithengi kwaphela-umntu uyasithengela. Isoftware esiyisebenzisayo ihlala igunyazisiwe ngenxa yobudlelwane bobumbano, isaphulelo, okanye indlela enxibelelana ngayo nezinye iinkqubo zethu. Kuyandimangalisa ukuba zingaphi izihlandlo iinkampani zinenkqubo yokuthenga eyomeleleyo, iimfuno zesatifikethi, izivumelwano zenqanaba leenkonzo, ukuthotyelwa kokhuseleko, ukuhambelana kwenkqubo yokusebenza… kodwa akukho mntu ngenene setyenziso isicelo kude kube lixesha elide emva kokuthenga kunye nokuphunyezwa.
Mhlawumbi, sesinye sezizathu zokuba isoftware yokuphanga ixhaphake kakhulu. Andifuni nokubala ukuba mangaphi amawaka eedola zesoftware endiyithengileyo endikhe ndayisebenzisa ndayeka, kwaye andikaze ndiphinde ndiyisebenzise.
Umbono ovela kwiNkampani yeSoftware
Umbono ovela kwinkampani yesoftware wahluke kwaphela xa uwonke! Nangona izicelo zethu zihlala zilungisa ingxaki ephambili kwaye yiyo loo nto abantu behlawulela yona… mininzi imiba yemfundo ephakamileyo phaya ekufuneka siyithathele ingqalelo xa siyiphuhlisa.
Ijongeka njani? -Nxamnye nenkolelo edumileyo, isoftware is ukhuphiswano loonobuhle. Ndingakhomba kuninzi lwezicelo ekufuneka 'zingumnini' wazo kwimarike kodwa ungazenzi nokusikwa ngenxa yokuba zingenabo ubuhle obubamba iintloko.
Ithengisa njani? Ngamanye amaxesha amanqaku ayathengiswa, kodwa ayisiyonto iluncedo. Kwimveliso ye-imeyile, bekukho ukutyhala okukhulu okwethutyana apho uShishino. Wonke umntu wayeyicela kodwa yayisibini kuphela abaBoneleli ngeNkonzo ye-imeyile ababenayo. Into ehlekisayo kukuba, emva konyaka, kwaye ayisamkelwa kwindawo ephambili ngabathengisi be-imeyile. Ngenye yezo zinto zithengiswayo, kodwa aziloncedo kangako (okwangoku).
Inqabiseke kangakanani? - le yenye yezinto 'ezincinci' ezingakhathalelwanga kodwa ezinokuhlala zitshona kwisivumelwano. Njengababoneleli besoftware, kufuneka sihlale silwela ukhuseleko kwaye siluxhasa ngophicotho oluzimeleyo. Ukungakwenzi oko kukungakhathali.
Izinzile kangakanani? Kuyamangalisa ukuba uzinzo ayisiyo into ethengwayo- kodwa iya kwenza ubomi bakho bube lusizi ukuba ngumcimbi. Uzinzo ngumba ophambili wesicelo kunye nenzuzo. Into yokugqibela ofuna ukuyenza kukuqesha abantu ukuba boyise imiba yozinzo. Ukuzinza sisicwangciso esiliqili esifanele ukuba sisiseko saso sonke isicelo. Ukuba awunaso isiseko esizinzileyo, wakha indlu eya kuthi ngenye imini idilike ize iwe.
Ngaba ilungisa eyiphi ingxaki? -Kungenxa yoko le nto ufuna isoftware kwaye iyakunceda okanye ayiyi kunceda ishishini lakho. Ukuqonda ingxaki kunye nokuphuhlisa isisombululo kukuba kutheni sisiya emsebenzini yonke imihla.
Imfihlo yeshishini lesoftware kukuba ASIThengisi, sithenge, sakha, sithengisa kwaye sisebenzise isoftware kakuhle. Sinendlela ende yokuhamba phambi kokuba siphumelele ngolunye usuku kwaye sikwenze ngokufanayo. Ukuhlala kweli shishini, iinkampani zihlala kufuneka ziphuhlise amanqaku kunye nokhuseleko ukuze zithengise, kodwa zincame ukusebenziseka kunye nozinzo. Ngumdlalo oyingozi. Ndijonge phambili kule minyaka ilishumi izayo kwaye ndiyathemba ukuba sikhule ngokwaneleyo ukufumana ibhalansi elungileyo.
Ngaba umsebenzi wakho uyasebenza? Bangaphi abasebenzi?
Sep 5, 2007 kwi-9: 51 AM
Owona mbuzo unzima endikhe ndiwuphendule yile, "Ukuba uyibiza ngokuba yinjineli yesoftware, kutheni unganazo iziphumo zokumisela iiprojekthi zakho."
Impendulo yam iyafana nale uthetha ngayo apha. Olu shishino lutsha kraca. Kusithathe amawaka eminyaka ukubuyela apho amaRoma ayefumene ngobunjineli. Elinye lamaxesha endandiwathanda e-Italiya yayikukundwendwela iPantheon e-Roma kwaye ndibona umngxunya apho u-Brunelleschi ekucingelwa ukuba wasika umngxunya ukuze abone ukuba amaRoma ayibeka njani idome enkulu (njengoko wayezama ukuqonda indlela yokugqibezela iDuomo eFlorence ).
Singqeqesho oluselula kwaye kuya kuthatha ixesha ngaphambi kokuba sivelise isoftware esemgangathweni ngendlela engaguquguqukiyo. Kungenxa yoko le nto abaphuhlisi bejongwa njengeentlobo zemilingo. Kufuneka silawule kangangoko sinako (inqaku lokuhamba, ukuvumela abathengisi ukuba baqhube uyilo lwesoftware, ulawulo olubi), kodwa asinako ukuyishukumisa inyani yokuba isoftware ethile inayo kwaye ezinye azikho. Kude kube ngoko, eli lixesha lokukhawuleza kwegolide!
Sep 10, 2007 kwi-9: 54 AM
Umqondo ophucukileyo ophucukileyo uyinyani kwiWebhu ye-2.0 Kubonakala ngathi iinkampani ezininzi ziyenziwa ngokujikeleza imveliso enye ongenakucinga ukuba inganakho ukugcina inkampani iphela… emva koko inokufunyanwa (elungileyo kwinkampani) okanye yona Ukuphuma emva kokumkelwa okuncinci.
Sep 15, 2007 ngo-4: 00 PM
Ndivumelana ngokupheleleyo nombono wokuba ishishini lesoftware alikaphuhlisanga ngokupheleleyo ukuya kwinqanaba ekufuneka likulo ngaphambi kokuba lilawule ukuba isoftware isasazwe kumthengi. Ndiyathetha ukuba ichanekile ngokupheleleyo xa usithi isoftware isetyenziswa ngokwahlukileyo kumthengi ngamnye kwaye ke ayisoloko yanelisa wonke umntu. Uluvo lwesoftware yomdyarho luvela ngenxa yokungoneliseki komthengi kuba ulungile uhlawula imali eninzi kwisoftware kwaye uyisebenzise kwaye uyincame kwaye ungaze uphinde uyisebenzise kwaye ndiyaqikelela ukuba olu luvo alulungelanga xa uthetha ngokuchitha imali kwinto ehlala ixesha elide. Ke ekugqibeleni umbono uyinyani de sibe sinokungqinelana ekuthengeni, ekwakheni, ekuthengiseni, nasekusebenziseni isoftware asikwazi ukuyeka ezi zimvo zingalunganga zivele.